जनताको हिरो कुलमानको घोषणा भारतीय निर्भरता हटाउँदै नेपाललाई बिजुली बेच्ने राष्ट्र बनाउने ! भारतलाई ठुलो झट्का «
जनताको हिरो कुलमानको घोषणा भारतीय निर्भरता हटाउँदै नेपाललाई बिजुली बेच्ने राष्ट्र बनाउने ! भारतलाई ठुलो झट्का
Published : 24 January, 2020 10:28 pm
तीन वर्षअघि ८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खुद घाटामा रहेको प्राधिकरणले कुलमान घिसिङलाई नेतृत्वमा पाएपछि निरन्तर नाफा कमाउँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६मा प्राधिकरण ७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ । संचित नोक्सानी करिब १५ अर्बमा झरेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले नेपाल विद्युत उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदै गएको बताएका छन्।
घिसिङले आफू आन्तरिक सुधारको अभियानमा रहेको पनि स्पष्ट पारे। काठमाडौंमा छरिएका यत्रतत्र तारहरु हटाउने क्रम जारी रहेको र सडक विस्तार तथा खानेपानी पाइपलाइनका केही समस्या भएको उनको भनाई छ। स्मार्ट विलिङ काठमाडौंमा सुरु भइरहेको र देशभरी कार्यान्वयनमा लगिने घिसिङले जानकारी गराए। उनले विद्युतीय सवारी सञ्चालनका लागि देशैभरी चार्जिङ स्टेशनहरु स्थापना गर्ने कार्य पनि अघि बढेको बताए।
घिसिङले आफ्नो सफलताको सुत्र इमान्दारिता र लगनशीलता भएको पनि बताए। ‘परिवारिक समयमा पनि काम गरेको छु’, उनले भने। घिसिङले काठमाडौं बाहिर विद्युतमा देखिएको आन्तरिक समस्या क्रमश सुधार गर्दै जाने प्रतिबद्धतासमेत जनाए। लोडसेडिङको अन्त्यसँगै नेपाल अब विद्युत उत्पादनमा आत्मनिर्भरता तर्फ लाग्दैछ। विद्युत प्राधिकरणका योजना के छन् त? प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नागरिक फ्रन्टलाइनमा।